आफ्नै छोराले मृत आमाको शब एक वर्षदेखि लुकाएर राखे, कारण थाहा पाउदा प्रहरी पनि परे चकित ! – Classic Khabar
September 11, 2021 193
अस्ट्रियामा एक व्यक्तिले आफ्नी आमाको शवलाई घरको भूमिगत कोठामा एक वर्षसम्म लुकाएर राखी उनको नाममा आउने पेन्सन लिने गरेको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। उनकी ८९ वर्षीया आमाको निधन गत वर्षको जुन महिनामा नै भएको ठानिएको छ। उनी विस्मृतिसम्बन्धी रोगबाट पीडित थिइन्।
Prevसङ्खुवासभा घटनाका आरोपी भतिजा पक्राउ
Nextकरिब एक बर्ष अघिको त्यो घटनाले लिएको रहेछ अहिले ६ जनाको ज्यान , के थियो त्यो घटना? यस्तो सम्म पो भएको रहेछ !